Waa maxay Sheeko Sheeko iyo sida loogu noolaado iyadoo loo marayo Infographics | Abuurista khadka tooska ah
Sheeko-sheegistu waxay ka kooban tahay farsamo loo isticmaalo sheekooyinka hab dhammaan dhagaystayaasha, akhristayaasha iyo / ama daawadayaashu u maareeyaan inay u fahmaan una fahmaan farriinta astaanta.
Waa hab qadiimi ah oo duug ah, oo in muddo ahba si aad ah loogu adeegsanayay astaamaha internetka, maxaa yeelay farqiga u dhexeeya sheegidda sheeko iyo fulinta Sheeko Sheeko ayaa ah Sheeko-qorista waxaa loo adeegsadaa in lagu tilmaamo astaan, adeeg iyo / ama wax soo saar.
1 Sida loogu adeegsado Sheeko sheeko xeeladaha suuqgeynta
2 Waa kuma Sheeko-Sheekaha muxuuse qabtaa?
3 Faa'iidooyinka sheekada markii loo isticmaalay istiraatiijiyad suuqgeyn ah
4 Samee infographic si aad sheekada u sheegto
Sida loogu adeegsado Sheeko sheeko xeeladaha suuqgeynta
Tan iyo markii si weyn loo aqbalay, farsamadan ayaa u oggolaatay fikradaha cusub in la soo saaro, kuwaas oo ay ka mid yihiin “suuq-geynta dareenka"Iyo"Suuq geynta sheekada”. Tan dambe ayaa loo tixraaci jiray fikradda ah in la sheego sheekooyinkaas oo si uun ugu xidhan astaan.
Sidoo kale iyada oo loo marayo fikradda ah "Suuq geynta sheekada”, Waxaa kaloo soo baxay shaqsiyad xirfadeed cusub, oo loo yaqaan Sheeko.
Waa kuma Sheeko-Sheekaha muxuuse qabtaa?
Sheekha sheekada waa qofka masuulka ka ah fulinta Sheeko sheeko sumadeed, ha ahaato mid shaqsiyadeed ama shirkadeed, ahaanshaha mid ka mid ah shaqooyinkeeda ugu waaweyn waa in la baaro waxa shakhsiyadeed ama taariikh shirkadeed ee sumadda la sheegay ay tahay, xiriir ka dhexeeyo dhacdooyinka, sheekadana laga dhigo mid la fahmi karo marka lagu daro dadnimada, iwm.
Faa'iidooyinka sheekada markii loo isticmaalay istiraatiijiyad suuqgeyn ah
Gudaha weyn waxtarrada aad kuheli karto adoo adeegsanaya Sheeko Sheeko Istaraatijiyad suuqgeyn ahaan, waxaa jira kuwan soo socda:
Way fududahay in la xasuusto: Sheeko kastaa waxay leedahay bilow, dhexe iyo dhammaad. Waxay muujiyaan dhacdooyin isku xigxiga, iyaga oo ka dhigaya kuwo si fudud loo xasuusto, iyo sidoo kale fududaynta aqoonsigooda.
Waxay leeyihiin faafitaan weynMaaddaama si fudud loo xusuusto, sidoo kale badanaa way fududahay in la gudbiyo, taas oo u oggolaanaysa sheekadaas in la sii wadaago iyo in ka badanba, sidaas awgeedna ereyga faa'iidada leh ee afku uu dhaco.
Waxay dhiirrigeliyaan kalsooni: Haddii sheekooyinka ugu "dhow" ee astaanta la sheego, waxaa suurtagal ah in daawadayaashu ay si dhow ula xiriiraan qaar ka mid ah dhinacyada lagu muujiyey iyaga, abuurista jawi wanaagsan oo dhiirrigeliya kalsoonida.
Waxay ka codsanayaan dhinaca xasaasiga ah waxayna soo saaraan xiriir: Sheekooyinka si fiican loo sheegay iyo kuwa sifiican loohelay waxay u muuqdaan inay abuurayaan xiriiro daawadayaasha, isla waqtigaas oo ay muujinayaan dhanka shucuurta astaanta.
Samee infographic si aad sheekada u sheegto
Si summadaadu u soo saarto sheeko lama iloobaan ah, waxaad u baahan tahay inaad isweydiiso su'aalo qaar ka hor intaadan bilaabin sameynta ama sameynta infographic:
Sidee ayay wax walba ku bilowdeen? Dadweynaha waxay rabaan summad guuleysata ama shirkad inay sheegto sida ay ku bilaabatay.
Maxay ahayd riyadaadu Waa inaad tiraahdaa waa maxay nuxurka astaantaadu, maxay ahayd ujeedka markii la bilaabay ganacsiga, iyo maxay tahay riyadaas adiga ku kaxaynaysa.
Caqabado noocee ah ayaad ka soo gudubtay? Had iyo jeer, iyadoo aan loo eegin waddada la doortay, waxaa jira dhagaxyo naga dhigaya inaan turunturoodo, si kastaba ha noqotee, muhiimaddu maaha inta jeer ee aad dhacday, laakiin waa inta jeer ee aad kacday, maadaama ay tahay wax run ahaantii gaara guubaabo. dad badan.
Sideed ku gaadhay ujeeddooyinka? Haddii aad ku guuleysato inaad ku soo gudbiso qaab muuqaal ah sheekada sida aad u gaadhay himilooyinkaaga, waxaad dadka siin doontaa kalsooni shucuurtaasina waxay ku xirnaan doonaan astaantaada.
Waa maxay yoolalkaaga cusub? Waa lagama maarmaan in lagu muujiyo shaxanka ujeedooyinkaaga cusub ay yihiin summad ama shirkad. Muujinta horumarka iyo isbeddelka joogtada ah waa hab fiican oo loo dhiirrigeliyo loona dhiirrigeliyo dadka.
Waa inaad ka jawaabtaa su'aalahan kahor ku samee sheeko sheeko ku qorida macluumaadkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waa maxay Sheeko Sheeko iyo sida loogu noolaado iyada oo loo marayo Infographics
Barnaamijyada iyo aaladaha ku jira nashqadeynta garaafka
Abuur ficilo Photoshop si aad waqtiga u ilaaliso